Toekarena –fiarahamonina: zara raha misy voka-pikarohana mivoaka | NewsMada
Toekarena –fiarahamonina: zara raha misy voka-pikarohana mivoaka
Zara raha misy voka-pikarohana mivoaka ataon’ireo mpikaroka eto an-toerana nefa mandeha ihany ny fitakiana vola any amin’ny fanjakana ho an’izay fikarohana izay. Amina sehatra rehetra, toekarena, fiarahamonina, fitsaboana, tontolo iainana, sns, zava-dehibe ho an’ny fampandrosoana ny firenena ny fanaparihana ny voka-pikarohana, araka ny fanamarihan’ny Pr Ratsimbazafy Jonah, mpikaroka momba ny gidro. « Raha mpikaroka na mpitsabo iray, tsy mamoaka ny fikarohana vitany, ohatra, ny fanafody, karazana heloka izany », hoy ny Pr Ratsimbazafy Jonah.
Koa fepetra takina amin’ny mpikaroka rehetra ny famoahana ny voka-pikarohana vitany, amin’ny maha matihanina azy ary izay koa ny hanakarama azy ireny. Misy anefa amin’ireo mpikaroka malagasy ireo mivarotra ny voka-pikarohana vitany any ivelany, nefa ny fanjakana malagasy, ny eny amin’ny oniversite no niara-nisalahy taminy taona maromaro nahatongavana amin’ny tanjona iray, nahazoana mari-pahaizana na niakarana sokajy eo amin’ny asa sahanina. Matiantoka noho izany ny firenena, ary tokony ho azo enjehina ny mpikaroka nahavita izany.
Olana iray lehibe anefa ny tsy fahampian’ny tetibola atokan’ny fanjakana ho an’ny fikarohana. 0,044 % monja izany raha tokony ho 1 % amin’ny tetibolam-panjakana, araka ny tapaky ny Academy of science africa. Tsy mbola lasa lavitra ary sarotra noho izany ny fanaovana fikarohana eto Madagasikara. Miankina amin’ny mpikaroka vahiny hatrany ny Malagasy. Manana ny minisiteran’ny Fampiarana ambony sy ny fikarohana isika, ka tsy tokony ho anarana fotsiny izany.